Fahasalamana sy toekarena: mampihena ny vola miditra ny fiantraikan’ny tazomoka | NewsMada
Fahasalamana sy toekarena: mampihena ny vola miditra ny fiantraikan’ny tazomoka
Aretina iray anisan’ny sakana lehibe ho an’ny fampandrosoana ny tazomoka, mbola mihanaka eto Madagasikara. Laharam-pahamehana anefa ny miady amin’io aretina iray io, araka ny namaritan’ny Roll Back Malaria, 2008 azy, hahatrarana ny tanjona ho an’ny fampandrosoana laharitra. Nambaran’ny FAO izany, ny taona 2016.
Voateny eto ny sehatry ny fahasalamana, ny aretina tazomoka, misy fiantraikany goavana lasa sakana amin’ny asa fampandrosoana. Ny vola tokony hampiasaina, ohatra, raha misy, lany amin’ny fitsaboana, ny tsy fahafaha-miasa, na mety hiafara mihitsy amin’ny fahafetasana. Raha ankizy indray, tsy afa-mianatra ka mitarika tsy fahafahana manohy fianarana. Midika izany fa ambany fahaizana, misy fiantraikany lehibe rehefa tonga eo amin’ny vanim-potoana tokony hiasana. Misy akony ratsy ny tazomoka eo amin’ny asa fampandrosoana aty amin’ny tapany atsimon’i Afrika, toy ny eto Madagasikara, raha ny fanadihadiana nataon’ny mpikaroka maro eo amin’ny sehatry ny fahasalamana.
Fahitana ny olana efa tany amin’ny taona 60, fanadihadiana nataon’i Becker (1965), mbola hita eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Miantraika any amin’ny fihariana ny aretina: mihena ny vokatra, mihena, araka izany, koa ny vola miditra na ny karama. Voaporofo izay fihenam-bokatra izay any amin’ny tontolo ambanivohitra, mahakely ny tolotra tonga eny amin’ny tsena sy mampitombo ny fanafarana vokatra avy any ivelany, sy mampiakatra ny vidim-piainana. Tsy ampy sy ratsy amin’ny ankapobeny ny vokatra avy amin’ny faritra iharan’ny tazo ny mponina maro aminy, no ho ny amin’ny faritra vitsy na tsy misy tratran’ny tazomoka.
Saika ahitana aretina tazomoka ireo faritra maro eto amin’ny Nosy, toy ny any Sofia, malaza taloha amin’ny fambolena hasy; ny any Atsimo Atsinanana, fantatra ny lazany amin’ny voly kafe… Ankoatra ny antony hafa, mihena ny vokatra noho ny aretina tazo mahazo ny mpamboly sy ny taranany. Fatiantoka goavana avokoa izany manomboka any amin’ireo mpamboly, ny mpanjifa mividy lafo, ary ny fahavoazana ho an’ny toekarem-pirenena ankapobeny ny fanafarana vokatra any ivelany.